Ndị na -emepụta chaja AC | Ndị na -ebubata ihe na chaja AC AC & ụlọ ọrụ China
EV Wallbox Pro-Smart Charger AC7KW ya na OCPP 1.6 & 2.0
Atụmatụ njikwa chaja azụmahịa. Jiri OCPP Protocol jikwaa ọdụ ụgbọ mmiri gị. Nlekota na akuko. Sochie ma mezie oriri ike. Akụ na ụba. Họrọ tarifu ume gị wee hapụ sistemụ ka ọ rụọ ọrụ na -akpaghị aka oge dị ọnụ ala iji kwụọ ụgwọ EV gị. PV VO ọzọ na -adịgide adịgide nwere ike ịnwe ihe pc pụrụ iche nwere ike ịnwe mbibi, ịtụfu na gburugburu obi ọjọọ. Ọrụ zuru oke nke OCPP Igwe nchaji anyị nwere ọrụ zuru oke nke ocpp1.6-J, gụnyere isi ọrụ. Smart chaja, ap ...
EV Wallbox Comercial Charger AC7KW nwere Socket na njikọ USB
Njirimara Ngwaahịa 7KW EV chaja ụlọ bụ chaja otu-AC nwere oke mmepụta 32A ugbu a, ahaziri maka ojiji nkeonwe. Site na iji usoro agbaziri agbazi na nha pere mpe, ọ na -echekwa ohere ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ, nke bụ ezigbo ngwọta maka ụlọ na ụlọ ọrụ gị. Chaja dabara maka ngwa ime ụlọ na n'èzí, yana nchekwa na ọkwa ruo IP65. Ọ na-akwado nrụnye nke mgbidi na nrụnye ala kwụ ọtọ. Site na modul WIFI wuru n'ime na-akwado nkwukọrịta OCPP p ...
EV Wallbox Commecial Charger AC7KW dakọtara na ụdị 1 ma ọ bụ ụdị 2
Emebere Njirimara ngwaahịa chaja azụmahịa 7KW maka ojiji ọha na iji nkwenye RFID. N'itinye oghere chaja ụdị 2, chaja dakọtara na ụdị 1 ma ọ bụ ụdị 2. N'ikwekọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ, chaja ev na-ere ahịa na-eji mita MID agbakwunyere iji hụ na izizi yana RCD wuru maka nchekwa. Chaja tinyekwara nchọpụta mgbapụta 6mA DC, nke na -ewepụ mkpa ọ dị maka ịrị elu dị elu nke ụdị RCD B. Enwere ike ijikọ chaja na chaja ...
EV Commercial Charger 3 phase AC11KW maka ụgbọ ala ike ọhụrụ
Njirimara • Ịchekwa oghere na ọ dị mfe ịwụnye • Ọrụ amamịghe maka chaja kachasị mma • mmelite ngwanrọ dị anya • Nhọrọ nhọrọ njikọta • Igwe arụnyere arụnyere maka njikwa ibu uru Uru dị mkpa • Ikwenye n'ụkpụrụ IEC • Otu ụzọ ruo 7.4 kW / 32 A • Usoro atọ ruo 43 kW / 64 A • Nchedo IP54, IK10 • Ndị na -ejikọ ụdị 2, oghere nwere ma ọ bụ na -enweghị mkpọchi • Obere oge, oke oke, oke mgbali, mmebi ala na nchedo oke agbakwunyere Advantage Newyea nke ...
Smart Electric Vehicle Comercial Fast Charger 22KW maka ụdị nke abụọ
Emebere Njirimara Ngwaahịa 22KW chaja azụmahịa maka ojiji ọha na iji nkwenye RFID. N'itinye oghere chaja ụdị 2, chaja dakọtara na ụdị 1 ma ọ bụ ụdị 2. N'ikwekọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe, chaja na-eji mita agbakwunyere MID iji hụ na izi ezi yana RCD wuru maka nchekwa. Chaja tinyekwara nchọpụta nchapu 6mA DC, nke na -ewepụ mkpa ọ dị maka ịrị elu dị oke ọnụ nke ụdị RCD B. Enwere ike ijikọ chaja na netwọkụ chaja ...
Chaja chaja EV Smart 44kW nwere plọg abụọ ụdị abụọ maka ọdụ chaja ọha
Njirimara ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ ụlọ ọrụ, chaja na-eji mita MID agbakwunyere iji hụ na izizi yana RCD wuru maka nchekwa. Chaja tinyekwara nchọpụta mgbapụta 6mA DC, nke na-ewepụ mkpa maka ọnụ ahịa dị oke ọnụ nke ụdị RCD B. Enwere ike ijikọ ọtụtụ chaja ọha n'otu ebe na netwọkụ naanị otu njikọ ịntanetị. Ekele mepere OCPP 1.6, a na -enyocha ma na -ejikwa chaja na ọnọdụ chaja dị ugbu a ...
Igwe chaja ọkwa 2 EV chaja nwere chaja 2
Atụmatụ dị mfe iji nkwụnye & gwuo egwu, arụ ọrụ dị mfe Ndozi ugbu a site na ịpị bọtịnụ na ike dị elu Max 7.4kw ike chaja Portable na adaba chajịa EV gị oge ọ bụla na ebe ọ bụla enwere ike ịtụkwasị obi & nchekwa TUV & CE nke kacha mma Uru nchekwa IP67 TUV akwadoro maka nchekwa Nchaji na oke gburugburu ugbu a mmezi Max 7 ọkwa na-akwụ ụgwọ nhọrọ ugbu a ihuenyo agba Gosi ezigbo oge chaja ọnọdụ Nkịtị siri ike njigide eriri siri ike dobe & gbadaa iguzogide ...
EV Wallbox Home Charger AC 3.5KW maka chaja EV
Njirimara: Ịkwụ ụgwọ pere mpe nkwụnye ma dị mfe igwu egwu dị mfe maka iji ụlọ eme ihe ngosipụta voltaji ugbu a, oge, ọnọdụ, mmejọ na ike. Lee anya ga -ama ihe niile! Ejikọtara nke ọma Ngwakọta arụkọtara ọnụ na kọmpat na-eme ka mmezi na mbupu dị mfe nchekwa karịa chaja gụnyere oke ọkụ, oke ọkụ, mgbali elu, obere voltaji, nchedo ihipu na nchedo DC. Uru ihuenyo LCD 4.3 ”nnukwu ihuenyo, nwere ike lelee ozi ihuenyo ahụ n'ụzọ dị mfe. Gbanwee imewe Nkwụnye, mgbe ahụ ịgbanwee ca ...
EV Wallbox Home Pro Charger AC7KW maka chaja EV
Njirimara Mgbanwe ọtụtụ usoro emebere: CCS, CHAdeMO, GB/T ； Charging Protocol ： OCPP1.6 ； Njikọ njikọ/ikuku maka njikọta na CMS. Ngosipụta LCD enyi na enyi maka interface ndị ahịa. IP54 ọdụ chaja n'èzí. Nwere ike ịnye ngwa nchaji nke na -emezu ụkpụrụ dị iche iche ma hazie dịka ihe ị chọrọ. Uru Igbe igbe Newyea AC bụ chaja ụlọ ọhụrụ na nke dị oke ọnụ ahịa n'ahịa. Ọ na -anapụta ọpụrụiche pụrụ iche a tụrụ anya n'aka onye ndu ụwa na charg ...
EV WallBox Pro-Smart Charger AC7KW nwere njikwa APP
Njirimara: Ịkwụ ụgwọ dị mfe nkwụnye ma dị mfe igwu egwu ezigbo oge ngosipụta voltaji ugbu a, oge, ọnọdụ, mmejọ na ike. Lee anya ga -ama ihe niile! Ejikọtara nke ọma Ngwakọta arụkọtara ọnụ na kọmpat na-eme ka mmezi na mbupu dị mfe nchekwa karịa chaja gụnyere oke ọkụ, oke ọkụ, mgbali elu, obere voltaji, nchedo ihipu na nchedo DC. Enwekwara nnukwu ihuenyo 4.3 ”nnukwu ihuenyo, nwere ike lelee ozi ihuenyo ahụ n'ụzọ dị mfe. Gbanwee imewe Nkwụnye, mgbe ahụ ịgbanwee nwere ike ịmalite ma ọ bụ ...